ခင်လွန်း – တစ်တီတူးတကောင်ရဲ့ အလံတော် | MoeMaKa Burmese News & Media
မင်းကိုနိုင် - “ မွေးနေ့လက်ဆောင် ”
ခင်လွန်း – တစ်တီတူးတကောင်ရဲ့ အလံတော်
ခင်လွန်း – တစ်တီတူးတကောင်ရဲ့အလံတော်
ကျည်မိုး ရွာရင်လဲ ငါ
တဘ၀လုံး ပြောင်းပြန်အိပ်ခဲ့တဲ့ တစ်တီတူးကောင်အဖြစ်ဟာ
အမေအိုနဲ့ အိမ်အိုကို လွမ်းသူ
ရွာထိပ် ဦးလေးသောင်း လက်ဖက်ရည်ဆိုင်နဲ့
ငါဟာ မအောင်မြင်သော ကဗျာဆရာ
ငါဟာ မထင်ပေါ်တဲ့ စာပေသမား
လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၄၀ နီးပါးက
၈၈ မှာ စစ်ကြောင်း နေ့စဉ်ချီပြီး
အခု အမေ သက်ရှိထင်ရှား
ရှိ မရှိတော့ကိုတောင် မသိတော့တဲ့
လိုရာ အတ္တ ကြီးလွန်းသူ
ခြေဦးတည့် ရွက်လွှင့်သမား ဆိုဆို
ငါဟာ ဆင်ဖမ်းသမားမဟုတ်လည်း မဟုတ်ခဲ့သလို
တောမီးလောင်လို့ တောကြောင် လက်ခမောင်းမခတ်ခဲ့သူ
ငြိမ်းချမ်းရေး ချိုးဖြူလေးလွတ်လပ်စွာ ပျံသန်းလာချိန်ကိုတော့
ဘက်နှစ်ဘက်၊ ရပ်တည်ချက် နှစ်ခု။
ဒေါင်းမာန်ဝင့်ကာ ညီလျက် တည်လျက် စည်လျက်
စာပေအနုပညာ မြတ်နိုးစိတ်များ ထွန်းကားလျက်။
အမှန်တရား ဘက်တော်သားတွေအဖြစ် ရပ်တည်လို့
အမှန်တရားအလံတော်ကို အမြင့်မားဆုံး လွှင့်ထူလိုက်ကြစို့။
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ကြံခင်းစုရပ်ကွက် စာပေဟောပြောပွဲ (၇ . ၂. ၂၀၁၅) ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ဦးဆောင် ကျင်းပခဲ့သူလူငယ်များအား ဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့် ပေးပို့ခဲ့သည့် ကဗျာဖြစ်ပြီး ဆရာမောင်သာချိုက မိမိကိုယ်စားဖတ်ကြားပေးခဲ့ပါသည်။